गीत तथा गजल लेखनमा पनि उत्तिकै माहिर मोडल सन्ध्या सानु | दर्पण दैनिक
प्रकाशित मिति: २०७८ भाद्र २८ गते ०९:३७
तपाईं कहिलेदेखि मोडलिङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु भयो ?
म सानै देखि नाँच्ने गाउने विभिन्न स्टेज कार्यक्रममा सहभागिता हुने गर्थेँ । विद्यालयमा हुने अतिरिक्त क्रियाकलाप भित्रको साँस्कृतिक कार्यक्रममा भाग लिने गर्थेँ । हुँदैहुँदै २०७२ साल पछि राजधानी काठमाडौ प्रवेश आएसँगै कलाकारितामा लागें ।
यो क्षेत्रमा लाग्ने प्रेरणा कोबाट पाउनु भयो ?
खासै कोही कसैबाट भयङ्कर साथ सपोर्ट तथा प्रेरित भएर कलाकारितामा लागेको त हैन । तर मेरो ममि, बाबा र ठुलो दादाको प्रेरणाले यस क्षेत्रमा लागेर आज यो स्थानसम्म आइपुगेको छु । घरपरिवारबाट भने मलाई एकदम साथ सहयोग छ ।
अहिलेसम्म कति म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्नुभयो ?
अहिलेसम्म ३ दर्जनभन्दा बढी गीतहरुमा अभिनय गरेको छु ।
गीत पनि गाउनु भएको छ कि मोडलिङ मात्रै गर्नुहुन्छ ?
मैले ‘माया गर्छु तिमिलाई’ बोलको एउटा गीत पनि गाएको छु । यो चाहिँ मैले रहरमा गाएको हुँ । मेरो प्रोफेसन चाँही मोडलिङ नै हो ।
यो क्षेत्रमा लागेपछि केकस्ता समस्या तथा चुनौती भोग्नु परेको छ ?
समस्या तथा चुनौती सबै क्षेत्रमा हुन्छन् । कलाकारितामा पनि धेरै समस्या तथा चुनौतीहरु छन् । यो क्षेत्रले मलाइ धेरै अफ्ठ्यारा र चुनौति दिएको छ । समाजले लगाउने लाल्छना, समाजले हेर्ने दृष्टिकोण हुँदै नभएको कुराले बनाईदिने बिबाद आदि मेरो लागि समस्या भएको छ । त्यस्तै अन्य क्षेत्रमा जस्तै यो क्षेत्रमा पनि धेरै चुनौतीहरु छन । आफुलाई स्थापित गर्न धेरै चुनौति छ । प्रतिस्पर्धा धेरै छ । निस्पक्ष र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा छैन । अर्को कुरा यो क्षेत्र पनि क्षमताभन्दा पैसा पावरमा नै चल्ने ईन्डस्ट्री भईसकेको छ । यस कारण यो क्षेत्रमा अगाडी अलि बढि चुनौती थपेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा मोडलिङ गरेर बाँच्न सक्ने अवस्था छ ?
एक हिसाबले बाँच्न सजिलो पनि छ । तर त्योभन्दा बढी मुस्किल झनै दोब्बररतेब्बर छ । अहिलेकै जस्तो कोरोना महामारी लगायत अन्य कुनै प्रकारका भवितव्य आयो भने भविष्य र कालान्तारमा यसै क्षेत्रबाट बाँच्ने स्थिति खासै देख्दिनँ । तैपनि त्यसो भनेर हार मानेर बस्ने कुरा पनि त भएन । त्यसकारण यसै पेशाबाट बाँच्ने आधार बनाउँछु भन्ने विचारमा छु ।
तपाँईंलाई कस्ता खालका गीतमा मोडलिङ गर्न मन पर्छ ?
नाँच्ने किसिमका दोहोरी गीतहरु, काठे गित तथा कुनै मजबुद विषयवस्तु तथा कथा बोकेका सबै दर्शक स्रोताको मन मुटुमा बस्ने खालका गीतहरूमा मलाई मोड्लिङ गर्न आनन्द लाग्छ ।
तपाईं एक छोरी मान्छे हुनुहुन्छ, सुटिङ गर्न घरबाट बाहिर जानुपर्ने हुन्छ त्यो वातावरण मिलाउन कतिको समस्या आउँछ ?
घरबाट निस्किन कुनै विघ्नबाधा छैन तर सुटिङ्ग सकेर घर फर्किदा ढिला हुने, सवारी साधन नपाउने लगायत समस्या हुने हुँदा अलिअलि बाधा अड्चनहरु आउँछन । कहिलेकाहीँ मान्छेका धेरै किसिमको कुराहरु सुन्नु पर्दा अलि खल्लो लाग्छ । तर मलाई जसले जे सोचे पनि मेरो काम प्रति गर्व लाग्छ ।
यो क्षेत्रमा आउन चाहाने नव आगन्तुक प्रतिभालाई के भन्नुहुन्छ ?
नव आगन्तुकलाई खुलेर आउनुस भन्न चाहान्छु । यो क्षेत्रका कामलाई गर्व गर्नुस । कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्दा चाहिने आधारभूत कुराहरु सिकेर आउनुस । अध्ययन नगरी नसिकी आउँदा धेरै चुनौतिहरु आउँछन । यो अरुको भविष्य र अरुको जीवनको ग्यारेन्टि लिने ठाउँ हैन । म कलाकार भएर यो क्षेत्रमा केही न केही योगदान दिन्छु भन्ने सोच बनाएर मात्रै यो क्षेत्रमा आउँदा राम्रो हुन्छ।
जे गरेपनि जति गरेपनि असुन्तुष्ट हुने त मान्छेक‍ो स्वभाव नै हो । मेरो कुरा गर्नु पर्दा म कलाकार नै बन्छु भविष्यमा भन्ने थिएन । रहरले मलाई यता तिर डोर्‍यायो । अहिले आफुलाई राम्रो बनाउछु भन्ने तिर नै लागेक‍ो छु । तर यदि यो क्षेत्रमा प्रवेश नगरेको भए म कुनै केही बिजनेस गरिरहेको हुन्थ्येँ ।
हामी कलाकारहरूका लागि दर्शक तथा श्रोताहरु नै भगवान हुन । त्यसैले मेरा सिर्जना तथा अभिनयलाई माया गरिदिनुहोला साथ दिनुहोला र सहि मुल्यांकन गरिदिनु होला । सबैको तागतले सबैको भबिष्य सुन्दर बन्छ । नजानिँदो ढंगले यो क्षेत्रमा पैसा र बैँशको खेति बढ्दै गएको छ । यस्ता क्रियाकलाप बन्द हुनै पर्छ । यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा सबैले बुझेर लागौँ भन्न चाहान्छु ।
यस्ता कुरा मैले सँधै भन्दै आएक‍ो पनि छु । त्यस्तै स्पष्ट नीतिनियम हुनैपर्छ । भन्न त राज्य तथा सरकारले कलाकारहरु गहना हुन भन्ने गरेको छ । तर यति मात्रै प्रयाप्त छैन र हुँदैन पनि । कलाकारहरू गहना मात्रै होईनन राष्ट्रका अंग हुन । देशको पहिचान हुन । त्यसकारण सरकारले पनि कलाकार र कलाकारिताको जगेर्ना गर्नको निम्ति रोयल्टिको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । कलाकारितालाई सरकारी सम्पति मान्नु पर्छ ।
कलाकारिता क्षेत्रमा लागेको व्यक्ति यसैबाट जीविकोपार्जन गर्न सक्ने वातावरण राज्य तथा सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्छ । यो क्षेत्रमा योगदान दिएका व्यक्तिले भोलि पलायन हुनुपर्ने दिन नाओस । म यही अनुरोध गर्छु ।
२०७८ श्रावण २७ गते ०७:५१